एजेण्डा सेट गर्न टेकोको उपयोग ! ए टेकाहरु हो ! कति प्रदेश हुनुपर्छ रे ….?? « Nepal Bahas
एजेण्डा सेट गर्न टेकोको उपयोग ! ए टेकाहरु हो ! कति प्रदेश हुनुपर्छ रे ….??
हामी नेपालीहरु लाटा कि उल्लू ?
प्रकाशित मिति : २५ बैशाख २०७६, बुधबार १६:२३
हामी नेपाली लाटा हौं कि उल्लू हौं दोधारमा परिन्छ । सबैजना भन्छन – यत्रो पच्चिस बर्ष नाघिसक्दा समेत मेलम्ची किन बनेन ? मेलम्ची शुरु भएको बर्ष जन्मेको एउटा बच्चा २५ वर्ष उमेर नपुगी मर्नेको संख्या लाखौं होला, तिनको अर्को जन्म पनि भयो होला तर मेलम्ची आएन किन ?
काठमाडौं उपत्यकामा मात्र खानेपानीको व्यापार अर्बौ रुपैयाँको छ , कम्तिमा ६/७ अर्बको छ भनिन्छ । मेलम्ची आएपछि यो व्यापारधन्दा समाप्त हुन्छ , पानीका ठूला व्यापारीहरुले मन्त्री–सचिवलाई कमिशन दिन्छन , मेलम्ची आएपछि यो कमिशनको मार्ग बन्द हुन्छ । अझ मेलम्चीको निहुँमा घोटाला गर्ने मार्ग पनि बन्द हुन्छ, अनि कसरी आउन दिइन्छ मेलम्ची ? भेंडा जनता जस्ता लाटा हुन र नेताहरु ? त्यसै मन्त्री हुने योग्यता राखेका छन् ?
धेरैले अचम्म माने, एकता कसरी सम्भव भयो ? म सरल भाषामा भन्छु – घर बनाउँदा ढलान गर्नुपर्ने हुन्छ , बिम हाल्न पर्नेहुन्छ, यति गर्न सबैभन्दा पहिले टेको लगाईन्छ , यी टेकाहरु तबसम्म राखिन्छ, जबसम्म ढलान वा बिम सेट हुँदैन । जब ढलान र बिम सेट हुन्छ तब यी टेकाहरु हटाईन्छ । बाबुराम, प्रचण्ड, उपेन्द्र, ओली, माकुने वा देउवाहरु केवल टेको हुन भन्ने कुरा नेपालीहरुले कहिले बुझ्ने ? यमराजले लठ्ठू… !! भन्दै तातो तेल खन्याएपछि…?
अर्को प्रश्न गरिन्छ, पानीको धनी देशमा २०–२५ वर्ष लोडसेडिङ्ग कसरी भयो ? नेपालमा ईन्भर्टर, व्याट्री, जेनेरेटर र सोलार प्यानलको व्यापार खर्बौ रुपैयाँ बराबरको हुन्छ । यी सामाग्रीहरुमा ६० प्रतिशत भन्दा बढी मुनाफा छ । लोडसेडिङ भएन भने यो व्यापार चुर्लुम्म डुब्छ । व्यापारीहरुले कमाईको २०–३० प्रतिशत लोडसेडिङ गराईदिए वापत नेता, मन्त्री , सचिव र प्राधिकरणको हाकिमलाई भेटी स्वरुप बुझाउँछन । अनि कसरी अन्त्य होस् लोडसेडिङ्ग ?
फेरि अर्को प्रश्न गरिन्छ , जलस्रोतको अपार भण्डार भएको यो देशमा जलविद्युतको विकास किन भएन ?
तेल बेच्ने राष्ट्रहरु र तेल उत्पादक कम्पनीहरुको एउटा संगठन छ, ओपेक । यो संगठनले जलविद्युत आयोजना बन्न नदिन ठूलो धनराशी खर्च गर्छ , वार्षिक अर्बौ डलर खर्च गर्छ भनिन्छ । किनकी जलविद्युतको पर्याप्त विकास भएमा तेलको खपत स्वभाविक रुपले कम हुन्छ । तेललाई मात्र राष्ट्रिय आयआर्जनको मुख्य माध्यम बनाउने राष्ट्रहरु २ दर्जन भन्दा बढी छन । ओपेकको पैसा नेपालमा पनि भित्रन्छ । यहि ओपेकको कोपभाजनमा अरुण तेस्रो परेको थियो र निर्माण थालनीको अन्तिम चरणमा अरुण जलविद्युत आयोजना तुहिएको थियो ।
ओपेकको पैसा खाएर अरुण निल्ने प्रमुख खलपात्र हुन माधवकुमार नेपाल । ओपेकलाई माधव नेपालसँग च्यानल मिलाईदिने प्रमुख पात्र हुन, कथित मानव अधिकारवादी गोपाल शिवाकोटी । अरुण निल्न तत्कालिन एमाले संगठित रुपले नै लागेको थियो, जसको खुलासा राधाकृष्ण मैनालीले समेत गरेका छन । अरुण तेस्रोको बारे जिज्ञासा हुनेले राधाकृष्ण मैनालीसंग सोधे हुन्छ । ओपेकको हरियो डलर आउने भएपछि कसरी बन्छ, जलविद्युत आयोजना ?
एकताका भारतिय विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ईस्लामिक आतंककारीहरुले अपहरण गरि अफगानिस्तानको कान्दाहार पुर्याए । भारतिय न्युज च्यानलहरुले नेपालको उडाउनुसम्मको खिल्ली उडाए । अतिरंजित रुपले २४ सै घन्टा नेपालको सुरक्षा व्यवस्था प्रति हेयको भावले टिप्पणी गरिरहे । नेपालको भूमिमा कुनै विमान अपहरणमा पर्नु नेपालको सुरक्षा व्यवस्थाको गम्भिर त्रुटी अवश्य हो तर भारतकै भूमिमा पनि कैयौं पटक विमान अपहरण भएको छ । शक्तिशाली देशहरु रुस, अमेरिका, बेलायत कै भूमिमा पनि तिनकै विमान अपहरण भएको छ। तर भारतिय मिडियाले विश्वभर यसरी प्रचार गर्यो मानौं कि आजसम्मको ईतिहासमा केवल एउटै विमान अपहरण भएको छ र त्यो अपहरण नेपालको भूमिमा भएको छ ।
नेपालको छविलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बेइज्जती गर्ने भारतिय मिडियाको प्रोपोगन्डाको खन्डन गर्न नेपालमा त्यस्तो कुनै प्रभावकारी टीभी च्यानल थिएन । विश्वभर रहेका नेपालीहरुले आफ्नो देशको बेइज्जति गरिरहेको भारतिय मिडियाहरुको समाचार सुन्न बाध्य थिए। नेपालमा एउटै टीभी च्यानल थियो नेपाल टेलिभिजन । यो च्यानल नेपालकै पनि सिर्फ १० प्रतिशत भूमिमा उपलब्ध थियो । किनकी यो च्यानल टेरेस्टरियल प्रविधिमा आधारित थियो । भारतिय विमान अपहरणपछि मात्र नेपालमा स्याटेलाईट प्रविधिमा आधारित टेलिभिजन च्यानलको आवश्यकता महशुस भएर बहस शुरु भएको थियो । आम नेपालीहरु भारतिय टीभीको अतिरंजित प्रचार सुन्न बाध्य थिए । भारतिय न्युज च्यानलको संवाददाताले त्रिभुवन विमानस्थलमै उभिएर लाइभ रिपोर्टिङ गर्दै थिए –नेपालको सुरक्षा व्यवस्था यस्तो गएगुज्रेको छ कि जो कोहीले पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हात्ती छिराउन सक्छ।
यो रिपोर्टिङ सुन्दैगर्दा मलाई आवेश चढेको थियो । किनकी खालिस्तान आन्दोलनका अगुवा कर्णेल भिन्डरवालले भारतिय विमान भारतिय भूमीबाटै अपहरण गरेर तत्कालिन प्रधानमन्त्री ईन्दिरा गान्धीलाई संसद अधिवेशन चल्दै गर्दा उडिरहेको विमानबाटै फोन गरेर संसदमा प्रस्तुत एउटा विधेयक फिर्ता गर्न बाध्य पारेको घटनाको प्रसंग मलाई थाहा थियो । तर हामी निरिह रह्यौं र भारतिय मिडियाले नेपालको छवी धुमिल्याउने समाचार सुन्न बाध्य रह्यौं।
पाकिस्तानी सेनाभित्र राजनीतिमा छिर्दा पाकिस्तानको हालत के भयो ? न्यायालय र प्रहरी संगठनभित्र राजनीति छिर्दा देशको हालत के हुन्छ भन्ने देउवा, प्रचण्ड वा ओलीलाई थाहा थिएन होला र ? तर यिनले मासुको भाग लगाए झैं न्यायाधिश र प्रहरी अधिकारीको पद भागबन्डा लगाए । किनकी यी नालायकहरु घर पोलेर खरानी बेच्ने , आफ्नै छोरी बम्बै बेचेर पकेट भर्ने नीच प्रवृत्तिका निकृष्ट मनुवा हुन ।
नेपालमा पहिलो पटक त्यतिबेलै हो, नेपाल टेलिभिजन स्याटेलाईट प्रविधिमा किन जान सकेन भन्ने प्रश्न उठेको । अन्य देशहरुमा त्यो बेलै एउटा व्यक्तिको लगानीले स्याटेलाईट प्रविधिमा आधारित टीभी च्यानल संचालन गरिसक्दा र हाल नेपालमै पनि च्याउ उम्रे झैं एउटा व्यक्तिको लगानीमा दर्जनौं स्याटेलाईट प्रविधिको टेलिभिजन च्यानल संचालन गर्नसक्ने अवस्थामा त्यो बेला नेपाल सरकारले एउटा सरकारी टेलिभिजन च्यानल पनि स्याटेलाईट प्रविधिमा किन लान सकेन ? यसको भित्री चुरो बुझ्ने हो भने जो सुकैको रगत उम्लेर आउँछ ।
खास कारण यस्तो थियो
नेपाल टेलिभिजनले त्यो बेला अपनाईरहेको टेरेस्टरियल प्रविधिमा प्रशारणको लागि आवश्यक रेडियो फ्रिक्वेन्सी टेरेस्टरियल टावर मार्फत रिले गरिन्छ । यो टावरको प्रशारण क्षमता र दूरी कमजोर हुन्छ, अग्ला पहाड , रुख र अन्य भौतिक संरचनाले प्रशारणमा बाधा हुन्छ । त्यसैले टेलिभिजन प्रशारणको दायरा बढाउन ठाउँठाउँमा टेरेस्टरियल टावरको आवश्यकता हुन्छ र नेपाल टेलिभिजनले ठाउँठाउँमा यस्ता टेलिभिजन टावरको स्थापना गरेको थियो । यी टावरमा कार्यरत कर्मचारीहरु मन्त्री , नेता , सचिवका आफन्तहरु हुन्थे । यस्ता टावरमा सबैभन्दा ठूलो समस्या चट्याङ्गबाट हुन्छ, चट्याङ्ग परेको निहुँमा करोडौं रकम हिनामिना गर्ने सु–अवसर हुन्थ्यो, अन्य प्राविधिक समस्याको नाममा घोटाला गर्ने राम्रो अवसर हुन्थ्यो ।
समष्टिमा, नेपाल टेलिभिजनका यस्ता टेरेस्टरियल टावरहरु मन्त्री , सचिव , तिनका भाई–चेला, बुहारी , रखौटीहरुको लागि दुहुनो गाई सरह थियो। नेपाल टेलिभिजनलाई स्याटेलाईट प्रविधिमा जोड्ने बित्तिकै यस्ता टावरहरुको आवश्यकता पर्दैन अनि तिनका आफन्तहरुको जागिर धरापमा पर्छ ,करोडौं कमिशन र घोटालाको मुहान सुक्छ । यसैकारण त्यो बेला नेपाल टेलिभिजनलाई स्याटेलाईट प्रविधिमा नलगिएको हो । यो यस्तो देश हो, जहाँ आफ्नो तुच्छ स्वार्थको लागि देशको एकमात्र राष्ट्रिय टेलिभिजन च्यानललाई वर्षौंसम्म ढुंगे युगमा राखियो ।
काठमाडौंको फोहोर र दुर्गन्धको कथा भनिरहन पर्दैन। धेरैको प्रश्न छ –काठमाडौं किन सधैं फोहोरको आहालमा छ ? के काठमाडौंलाई प्रदुषणमुक्त, धुलो–धुवाँमुक्त गर्न सकिंदैन ? मजाले सकिन्छ, ६ महिनाभित्र तर गरिंदैन, किन ? यहाँ पनि अर्बौंको चक्कर छ । वातावरण र प्रदुषणको नाममा काम गर्ने सयौं आईएनजीओहरु राजधानीमा कार्यरत छन । यिनको धन्दा तबसम्म मात्र मालामाल हुन्छ जबसम्म काठमाडौं फोहोरको आहालमा डुबिरहन्छ । यो यस्तो हो , जस्तो कि मान्छे बिरामी हुन छोडेपछि डाक्टरको व्यापार सुक्छ, मान्छे दुखबाट मुक्त भएपछि साधु–सन्तको धन्दा सुक्छ।
यी आईएनजीओहरु वातावरण प्रदुषण नियन्त्रणको नाममा विदेशबाट अर्बौं भित्राउँछन, यो त यिनको बाहिरी काम हो , यिनको भित्री कामहरु दाताहरुको व्यापारिक, राजनीतिक र आर्थिक रणनीति पुरा गर्नु रहेको छ । यसरी काठमाडौंको फोहोरसँग पश्चिमाको व्यापारिक स्वार्थ मात्र होइन नेपाललाई बेस बनाएर आर्थिक महाशक्तिको रुपमा उदाउँदै गरेको चीनलाई घेराबन्दीमा पार्ने स्वार्थसँग जोडिएको छ। काठमाडौं सफा भए पश्चिमाका भरिया आईएनजीओहरु के निहुँले बस्ने ? नेता ,मन्त्री, सचिव, मेयरका कन्सल्टेन्टहरु यिनकै एजेन्टहरु छन । यिनलाई थाहा छ, नेता–सचिवहरु लोभी छन,नेपालका नेताहरु घर पोलेर खरानी बेच्ने र खरानी बेच्न सकेकोमा गर्व गर्ने खालको बुद्धिका छन् ।
अब फेरि काठमाडौ किन सफा भएन भन्ने प्रश्न ?
बिरालोलाई दुधको साक्षी बनाएपछि दुधको रक्षा कसरी हुन्छ ? स्याललाई कुखुराको पाले बनाएपछि कुखुराको रक्षा कसरी हुन्छ ?
फेरि दोहोर्याएँ – हामी नेपाली लाटा हौं कि उल्लू हौं म कन्फ्युज हुन्छु ! भर्खर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव बीच एकता भयो । केहि समय अघि बुर्जुवा एमालेसँग क्रान्तिकारी प्रचन्डले एकता गरे …..वा गराईए….? । धेरैले अचम्म माने, एकता कसरी सम्भव भयो ? म सरल भाषामा भन्छु – घर बनाउँदा ढलान गर्नुपर्ने हुन्छ , बिम हाल्न पर्नेहुन्छ, यति गर्न सबैभन्दा पहिले टेको लगाईन्छ , यी टेकाहरु तबसम्म राखिन्छ, जबसम्म ढलान वा बिम सेट हुँदैन । जब ढलान र बिम सेट हुन्छ तब यी टेकाहरु हटाईन्छ । बाबुराम, प्रचण्ड, उपेन्द्र, ओली, माकुने वा देउवाहरु केवल टेको हुन भन्ने कुरा नेपालीहरुले कहिले बुझ्ने ? यमराजले लठ्ठू… !! भन्दै तातो तेल खन्याएपछि…?
प्रभुहरुले नेपालमा माईक्रो म्यानेजमेन्ट पद्धतिबाट निश्चित एजेण्डा सेट गर्न प्रचण्ड नामको टेको ठड्याएका थिए, त्यो एजेण्डा जब सेट भयो तब प्रचण्ड नामको टेको हटाईयो । सबैलाई थाहा छ–घरको ढलान र बिम सेट गर्न ठड्याईएको टेको हटाईएपछि त्यो टेकोलाई अर्को घरको ढलान र बिम सेट गर्न उपयोग गरिन्छ । प्रचण्ड नामको टेको एउटा एजेण्डा सेट गर्न प्रयोग भएपछि रातारात अर्को एजेण्डा सेट गर्न ठड्याईयो ।
एउटा निश्चित एजेन्डा सेट गर्न उपेन्द्र नामको टेको ठड्याईयो र संघियताको एजेण्डा स्थापित गरियो । अर्को एजेण्डा सेट गर्न बाबुराम नामको टेको ठड्याईयो, बाबुराममार्फत एउटा एजेण्डा सेट भएपछि यो टेको निकालियो अर्थात उनलाई माओवादीबाट अलग गराईयो । संविधान जारी भएपछि उनी आफैंले भनेका छन – माओवादीसँगको मेरो प्रयोजन समाप्त भयो । अब अहिले बाबुराम–उपेन्द्रहरुलाई अर्को एजेण्डा सेट गर्न टेकोको रुपमा ठड्याईदैछ । ए टेकाहरु हो ! भनत, कति प्रदेश हुनुपर्छ रे ….??
राजनीति र सामाजिक परिवेशको खरो टिप्पणी गर्ने विश्लेषक श्रेष्ठको फेसबुक वालबाट यो लेख साभार गरिएको हो –सम्पादक
आलु खेतीका लागी माटो परीक्षण, किसान खुशी